Xisbiga KULMIYE marna ma rabo in uu carqaladeeyo xidhiidhka dalalka deriska ah, gaar ahaan dawladaha Itoobiya iyo Djibouti oo si gaara xidhiidh sokeeyenimo uga dhexeeyo shacabka iyo dalalkaas. | Somaliland.Org
January 29, 2009	Hargeysa, January 28,2009 (Haatuf)- Xisbiga mucaaridka ah ee KULMIYE ayaa si kulul u beeniyey war ku soo baxay wargeyska Waaheen cadadkiisii 147 ee soo baxay shalay , 27,01,2009, kaas oo sheegaayey in masuuliyiinta xisbiga KULMIE ku dhawaaqeen in ay tirtiri doonaan heshiisyada xukuumada madaxweyne Riyaale la gashay dawladaha Itoobiya iyo Djibouti, isla markaana ay baabi’in doonaan jeelasha waxaanu KULMIYE warkaasi ku tilmaamay been aan sal iyo raad toona lahayn, sidaana waxa uu ku sheegay warsaxaafadeed ay shalay soo saareen.
War-saxaafadeedkan oo uu ku saxeexnaa ku-simaha Afhayeenka xisbiga KULMIYE, Yuusuf Nuur Maxamed (Guruuje), waxa uu isagoo daba socda warka ku soo baxay wargeyska Waaheen ku faahfaahiyay ujeeddadii iyo waxyaabihii lagaga hadley shirweynihii KULMIYE ee ka dhacay London, waxaanu war-saxaafadeedkaasi u qornaa sidan: “Xisbiga KULMIYE wuxu isagoo aad uga xun beeninayaa war ku soo baxay wargeyska waaheen cadadkiisii 147 aad ee 27/01/2009 ku sheegay in mas’uuliyiinta xisbiga KULMIYE ku dhawaaqday in ay tirtiri doonaan heshiisyada Somaliland la gashay dawladaha Itoobiya iyo Djibouti jeelashana baabi’in doonaan.
Waxa haddaba xisbiga KULMIYE aad uga xun yahay una beeninayaa warkaas aflagaadada ah ee aan sal iyo raad toona lahayn.
Xisbiga KULMIYE xidhiidh sokeeyenimo oo taariikhi ah la leeyahay dawladaha deriska ah iyo kuwa caalamka oo dhan, gaar ahaan dawladaha Itoobiya, Djibouti iyo Kenya oo uu dhawaan safaro ku soo maray guddoomiyaha xisbiga KULMIYE.
Waxaanu ka raali galinaynaa akhristayaasha joornaalka Waaheen warkaas beenta cad ah ee aan sal iyo raad toona lahayn.
Baaqa Waaheen beenta ka sheegtay oo ka soo baxay shirkii KULMIYE ee London, waa sida lifaaqan ku cad”
Ujeedada shirku waa: - Dar dargelinta hawlaha xisbiga iyo u diyaargarawga doorashada soo socota - Xoojinta iyo xidhiidhka xubnaha xisbiga ee guddaha iyo dibadda iyo doorkuu qurbajoogu ka qaadan karo doorashada soo socota. Madaxdii KULMIYE ee shirka ka hadashay waxay: - Welwel iyo walaac ka muujiyeen siyaasadda xukuumadda Somaliland ee hadda oo loo arko inuu yahay mid ku tagri fashay awooddii qaranka, kuna tumatay sharcigii iyo distoorkii u yaallay, kuna tacadiday xuquuqdii shacbiga ee asaasiga ahayd oo aanay ixtiraamin xorriyatul qawlka iyo saxaafadda xorta ah ee ka hirgashay Somaliland. - Tibaaxeen in KULMIYE yahay xisbi isbedel doon ah, waxaanu diyaar u yahay inuu dhiso xukuumad tayo leh oo dhibkeeda iyo dheeftadaba loo siman yahay. - KULMIYE wuxuu leeyahay siyaasad cad oo ka turjumaysa baahida bulshada. Waxaanu xisbigu wax ka qabanayaa horumarka dhaqaalaha, waxbarashada, daryeelka caafimaadka, wuxuu sugi doonaa nabadgelyada qaranka. Sidoo kalena wuxu cidhibtiri doonaa musuq maasuga baahay ee hadda aafeeyey hay’adaha qaranka. - KULMIYE waa hormoodka dimoqraadiyadda Somaliland, waxaanu guulo kasoo hooyey doorashooyinka dalka ka dhacay. Haddana wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb galo doorashada soo socota, wuxuuna aaminsan yahay inuu ku guulaysanaayo doorashada soo socota ee madaxweynaha Haddaba shirka oo si fiican loo soo agaasimay ayna ka hadleen madaxda xisbiga ee gudaha iyo dibadduba waxaa gebagebadii shirkaas kasoo baxay warmurtiyeedkan iyo baaqyadan hoose: - KULMIYE wuxuu u mahadnaqayaa dhammaan shacbiga Somaliland sidii fiicnayd ee nabadgelyadu ku jirtay ee ay uga qayb galeen diiwaangelintii. Waxaanu u aragnaa inay ahayd tallaabo taariikhi ah oo la gaadhay. Waxanaan ugu baaqaynaa shacbiga inay sidoo kalena u diyaargaroobaan inay si nabadgelyo iyo xasilooni leh ugu codeeyaan doorashada soo socota. - KULMIYE wuxuu ugu baaqayaa in xisbiga talada ee UDUB uu dhakhso u qabsado shirweynihiisii, soona xulaan musharixiinta madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa. Waxaana ugu baaqayaa in xisbiga UDUB ay ka dhacdo gudihiisa tartan ku salaysan dimoqraadiyad lagu soo xuli doono musharaxiinta u tartami doonta jogooyinka madaxweynaha iyo ku xigeenka. - KULMIYE wuxuu diyaar u yahay in doorashadu ku dhacdo wakhtigii loo cayimay ee 29 Maarso 2009, mana aqbali doono dibudhac ku yimaadda doorashada. - KULMIYE wuxuu ku kalsoon yahay guddida doorashada qaranka, waxaanu ugu baaqayaa in xukuumadda iyo xisbul xaakimkeeda is barkani ay dibin daabyada ka daayaan Guddida Doorashada qaranka oo gacan ka siiyaan sidii ay ugu dan lahaayeen xilkan qaran ee loo igmaday. - KULMIYE wuxuu ugu baaqayaa Guddida Doorashada qaranka inay dhex u ahaadaan axsaabta tartamaysa oo ay xaqsooraan xisbiyada qaranka ee ku loolamaya maskabka ugu mudan maandeeq. KULMIYE wuxuu ugu baaqayaa Komishanka qaranka inaanay u dhega nuglaan una jilcin cadaadiska kaga imanaya xukuudda si ay uga fushadaan danahooda gaar ah. - KULMIYE wuxuu canbaaraynayaa xadhigii lagula kacay Cabdirashid Ducaale Qambi iyo Ahmed Cabdi Gadhle oo dhawaan lagu xidhay magaalada Hargeysa. Waxaanan ugu baaqaynaa inay xukuumaddu ka waan towda xadhiga xaqdarrada ay kula kacdo xubnaha ka tirsan xisbiga KULMIYE. Waxaanan u aragnaa in mar haddii lagu waayey eedihii raqiiska ee loo soo jeediyey ay xubnahani u xidhnaayeen fekerkooda siyaasiga ah oo ay ahaayeen maxaabiis siyaasadeed. Arrintani maaha mid laqaadan karo waa na mid ceeb ku ah dimoqraadiyadda Somaliland kana soo horjeeda shuruucda iyo distoorka qaranka. - KULMIYE wuxuu ugu baaqayaa in xukuumaddu Somaliland ay ixtraamto kuna dhaqanto sharciga iyo distoorka. Sidoo kalena ay ixtiraamto xuquuqal insaanka, saxaafadda xorta ah iyo cabiraadda fekerka siyaasadeed. - KULMIYE wuxuu ugu baaqayaa waddamada aan jiiraanka nahay ee Geeska Afrika ee ay ka socdaan colaaduhu in dagaalka la joojiyo wixii dhibaato ah ee jirina lagu dhammeeyo waan waan iyo wada xaajood. Waxaan u aragnaa in Geeska Afrika muddo badan ay ka taagnayd xasilooni darro iyo macaluul. Haddana lagaadhay wakhtigii lasoo afjari lahaa dagaalada aafeeyey mandaqadda. Lagana shaqeeyo sidii loo heli lahaa xasilooni si loo gaadho horumarka la hiigsanaayo. - KULMIYE wuxuu ugu baaqayaa bulshada caalamka inay aqoonsadaan oo garwaaqsadaan tallaabooyinka horusocod ee ay qaaday Somaliland . KULMIYE wuxuu arkaa in la gaadhay wakhtigii bulshadu caalamku ay ogolaan lahaayeen inay Somaliland xubin ka noqoto Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa. - KULMIYE wuxuu u arkaa in Somaliland oo hesha aqoonsi caalami ahi uu wax wayn katari doono xallilinta dhibaatada ka taagan mandaqadda Geeska Afrika. Somaliland oo iyadu aqoon iyo waayo aragnimo wayn u leh xallilinta khilaafka, waxay gacan ka gaysan kartaa sidii gobolada kale ee Geeska Afrika ee Somaliya kamid tahay loogu heli lahaa xal waara. - KULMIYE wuxuu ku baaqayaa in Somaliland iyo Somaliya ay noqdaan laba dal oo jiiraan ah oo leh xuduudo caalami ah oo ay ka dhaxayso walaalnino iyo derisnimo wanaag. - KULMIYE wuxuu aqoonsan yahay doorku qurbajooga Somaliland ku leeyahay horumarka iyo dibudhiska dalka. Wuxuuna xisbigu arkaa in qurbajoogu ka danbeeya horumarka balaadhan ee ay ku tallaabsatay Somaliland . KULMIYE wuxuu ugu baaqayaa golayaasha xeerdejinta in la cayimo xuquuqda qurbajooga oo ay dalka ku yeeshaan xuquuq lamid ah ta muwaadiniinta waddankii jooga ay leeyihiin. Qurbajoogu waxay xaq u leeyihiin inay kaqayb galaan doorashooyinka oo waxna doortaan lana doorto sidoo kalena isu soo sharraxi karaan inay qabtaan mansabka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa. - KULMIYE wuxuu u mahadnaqayaa taageerayaasha qurbajooga oo xisbiga ka caawaya dhinaca dhaqaalaha. KULMIYE wuxuu qurbajooga ka codsanayaa inay laban laabaan kaalmada dhaqaale ee sannadkan si xisbigu u helo dhaqaale uu ku galo olalaha doorashada soo socota. - KULMIYE wuxuu ugu baaqayaa shacbiga Somaliland ay taageeraan xisbiga KULMIYE oo ay codkooda siiyaan si uu ugu guulaysto doorashada soo socota ee madaxweynaha. Waxaana KULMIYE u arkaa in danta qaranku ku jirto muxaafid iyo mucaaridba in la helo isbadal siyaasadeed. Isbadalka loo baahan yahay waxaa keeni kara xisbiga KULMIYE oo diyaar u ah inuu adeego bulshada. Markaas si taas loo helo KULMIYE wuxuu uga baaqayaa inay shacbiga Somaliland ay codkooda siyaasiyaan xibiyada mucaaridka ah ee hormuudka u yahay xisbiga KULMIYE” waxaana ku saxeexnaa Guddiga qaban qaabada shirka KULMIYE ee London.” This entry was posted in Press Release. Bookmark the permalink.	Comments are closed.